Jean-Michel Cousteau Resort Fiji Inopa Isingaenzaniswi Mhuri Zororo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Jean-Michel Cousteau Resort Fiji Inopa Isingaenzaniswi Mhuri Zororo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Fiji Breaking Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Mufananidzo nerubatsiro rwefijiresort.com
Iine mhuri dziri kutarisira kuungana zvakare uye kunakidzwa nezviitiko zvakagovaniswa, Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, iyo yekutanga eco-adventure yeumbozha nzvimbo muSouth Pacific, inopa huwandu hwezviitiko zvakafanira vafambi vemarudzi mazhinji.
Iyo South Pacific's Premier Eco-Luxury Resort Inopa Imwe-ye-a-Kind Zviitiko uye Zvakaitika kune Vese.
Yakavakirwa munzvimbo yakasarudzika, ine hunyoro inotonhorera pachitsuwa cheVanua Levu yakatarisana nerunyararo mvura yeSavusavu Bay, Jean-Michel Cousteau Resort ndiko kutiza kusingaenzaniswi kwemhuri huru dzakatambanudzwa dziri kutsvaga kugadzira ndangariro dzinogara dzezvizvarwa zvinotevera, kuzorora, uye kushanya mushure memwedzi yekugara kwakaparadzana uye kubatana kuburikidza nekusingaperi videoconference chats.
Kufamba kwemarudzi akawanda kuri kuramba kuchikura:
Zvinonzi chinhambwe chinoita kuti mwoyo ukure kufarira, nepfungwa iyoyo mhuri dzinogona kuungana nechido uye kugadzirisa nguva inopedzerwa kure nemumwe mukati memakore maviri apfuura. Kufamba nemadzisekuru, vana vehanzvadzi nevazukuru hakuna kumbonyanya kukosha
Nechishuwo chekuungana kwemhuri kwakawedzerwa kuri kuwedzera pasi rose, mhuri dziri kutsvaga nzira dzekubatana munzira dzine musoro. Sechinyakare, zororo remhuri dzemarudzi akawanda rave riri pamusoro penzira dzekugadzira zvisungo zvemhuri zvakasimba uye ndangariro dzinokosheswa.
"Tinoziva kukosha kwemhuri zvakare kukwanisa kumbundira, kuunganidza, uye kufamba zvakachengeteka mushure memikana yakawanda yakarasika mumakore maviri apfuura, zvinounza mufaro kumwoyo yedu kugamuchira vaenzi nemhuri dzavo kuJean-Michel Cousteau Resort, "Akadaro Bartholomew Simpson, maneja mukuru weJean-Michel Cousteau Resort, Fiji. "Nemafambiro emarudzi akasiyana-siyana ari pamusoro pezvinyorwa zvemabhakiti emhuri akawanda e2022, hazvina kumbonyanya kukosha kuti Jean-Michel Cousteau Resort igovane zvirongwa zvedu zvakarongwa uye zviitiko zvinoratidzira zvinoshamisa zvinoshamisa zvenzvimbo yedu yeSouth Pacific."
"Tinoramba takatsiga mukuzvipira kwedu kupa vaenzi vedu zororo rakanaka, risingakanganwike."
Nzvimbo yepamusoro yekufamba kwemarudzi akawanda:
Yakakwana kuhukama hwemhuri, vaenzi vanodzoka uye vatsva-vanotsvaka rwendo vachawana mukana wekurara muhofisi yechokwadi yeFijian, kunyura mune imwe yemvura inoyevedza pasi rose, kuzorora snorkel uye kuongorora nharaunda kuburikidza negungwa kayak, kana kutizira kune imwe yemvura inoyevedza pasi rose. chitsuwa chega chepikiniki. Yakagadzirirwa vafambi veese mazera, vashanyi vanogona zvakare kushanyira mangrove, pearl purazi, yechokwadi Fijian musha, kana kukwira nemusango rinopisa rinonaya mvura uye kuwana yakavanzika mapopoma.
Kunyangwe vaenzi vadiki vachashamiswa nekushanya kuBula Club, kirabhu inohwina mibairo yevana yekutandarira, kwavachapedza mazuva avo vachiongorora nekudzidza nezvenyika yakavatenderedza kuburikidza nemitambo uye zviitiko zvekunze. Vana vane makore mashanu zvichidzika vanopihwa nanny yavo panguva yekugara kwavo; uye vana vane makore 5 kusvika ku6 vanopinda mumapoka maduku anotungamirirwa neshamwari.
Vashandi veJean-Michel Cousteau Resort vakabayiwa nhomba, vakadzidziswa uye vakazvipira kudarika mwero wepamusoro weCovid-19 kuchengetedzeka nehutsanana zviyero uku vachipa basa rehunyanzvi uye rekugamuchira vatengi. Vashandi vanokwazisa vaenzi neakavhara kumeso, uye mune dzimwe nguva magurovhosi, uku vachiona kushamwaridzana uye kwemuviri kureba. Pamusoro pezvo, nzvimbo dzese dzepamusoro dzekubata dzinocheneswa uye kucheneswa kazhinji.
Pamusoro pezvo, Tourism Fiji yakagadzira "Kuchengeta Fiji Kuzvipira, "chirongwa chine kuchengetedzwa kwakawedzerwa, hutano uye hutsanana pasirese mushure medenda sezvo nyika inovhurazve miganhu kune vafambi. Chirongwa ichi chakatambirwa neanopfuura mazana maviri ezvitsuwa zvekutandarira, vanoshanya, maresitorendi, zvinokwezva nezvimwe.
Vangangove vashanyi muUS vanogona kubhuka kubhuka nekufona (800) 246-3454 kana kutumira email. [email inodzivirirwa], uye vashanyi vanosvika kubva kuAustralia vanogona kubhuka nekufona (1300) 306-171 kana nekutumira tsamba [email inodzivirirwa].
Kuti uwane rumwe ruzivo nezveJean-Michel Cousteau Resort, ndapota shanya fijiresort.com.
The Canyon Boka reMakambani, varidzi venzvimbo yekutandarira, ine muzinda kuLarkspur, California, yakavambwa muna Chivabvu 2005. Mantra yaro ndeyekuwana nekugadzira nzvimbo diki dzepamusoro-soro dzakashongedzwa munzvimbo dzakasarudzika dzine zvikamu zvidiki zvekugara zvichigadzira pfungwa dzakasiyana-siyana asi dzinoenderana nenharaunda munzvimbo yega yega. . Kubva payakagadzirwa muna 2005 Canyon yakagadzira nzvimbo inoyevedza yenzvimbo dzekutandarira, munzvimbo dzinobva kumvura yeturquoise yeFiji kusvika panhongonya dzeYellowstone, kuenda kumakoroni eSanta Fe, uye muCanyons yekumaodzanyemba Utah.
Dzimwe nhau nezve Fiji